China 65w gallium nitride adapter 12 in 1 Type-C dock(2 in 1) mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
65w gallium nitride adapter 12 in 1 Type-C dock (2 in 1)
Modely: OS- KZ001
Multi-asa interface tsara, mety amin'ny karazana fitaovana isan-karazany: type-C/F PD60w, USB3.0 5Gbps, HDMI 4K HD, Gigabit Ethernet seranan-tsambo 1000Mbps, VGA1080P, TF/SD karatra slot 3.0, Audio amin'ny Mic 3.5mm, Type- C PD 18w.
HDMI, USB 3.0*3, seranan-tsambo gigabit, seranan-tsambo PD * 2, slot karatra SD/TF, feo 3.5mm, Type-C 3.1, VGA
tariby herinaratra AC
(CN,US GB, AU) halavany 1.5M
Type-C mampita tsipika angona miaraka amin'ny
1. manohana 10 fampitana angona
2. manohana 4K 40Hz fifindran'ny lahatsary, E-Marker chip
3. manohana PD 100w avo amin'izao fotoana izao mamaly
volafotsy, mena, volondavenona espace, manga maizina, maitso matroka
• Famolavolana ho an'ny MacBook: MOKiN USB C HUB dia natao manokana ho an'ny MacBook Pro 2020/ 2019/ 2018/ 2017/ 2016, 13&15.4&16", Macbook Air 2020/2019/2018. Ny HUB dia manana seranan-tsambo 4K 60Hz VGA roa, 60Hz VGA, 10Hz seranan-tsambo, fanaterana herinaratra 87W, seranan-tsambo Ethernet 1000Mbps, seranan-tsambo 2 x USB 3.0, seranan-tsambo 2 x USB 2.0, mpamaky karatra SD/TF 3,5 mm mic/audio.
• Manohana fampisehoana efijery telo: ny MOKIiN USB C docking station, izay manohana fampisehoana miaraka amin'ny efijery telo, dia afaka mampitombo in-telo ny fahombiazan'ny asanao.Ny seranana HDMI roa dia manohana vahaolana hatramin'ny 4K 60Hz.Ny seranan-tsambo VGA dia manohana vahaolana hatramin'ny 1080p 60Hz.Azafady, azafady: Raha te-hahafantatra ny maodely mandroso ianao dia mila MacBook misy DP1.4, raha tsy izany dia mahatratra 4K@30Hz ihany ny efijery mivoaka.
• Efijery telo: afaka mampiasa interface roa HDMI sy VGA iray ianao hanitatra amin'ny fotoana iray.Na izany aza, raha mampiasa port video telo miaraka ianao, ny iray amin'ireo seranana HDMI sy VGA dia tsy mety amin'ny fomba fitaratra ihany, ary ny seranana HDMI hafa dia amin'ny fomba fanitarana.Raha mampiasa seranan-tsambo HDMI roa ihany ianao amin'ny fotoana iray dia azonao atao ny mampiasa ny fomba fanitarana.
• Tobim-piantsonan'ny MoKiN misy seranan-tsambo Ethernet 1000 Mbps, afaka misintona sarimihetsika haingana kokoa ianao, mamindra rakitra ary mampihena ny faharetan'ny lalao.Ny seranana USB 3.0 roa dia manohana ny tahan'ny famindrana angon-drakitra hatramin'ny 5Gbps.Ny famakiana karatra SD sy TF dia maka segondra vitsy monja.Ny seranana USB 2.0 roa dia mety kokoa amin'ny totozy, kitendry na fitaovana hafa.
• Ny karatra SD sy ny karatra micro SD dia azo ampiasaina miaraka amin'ny tahan'ny famindrana haingana hatramin'ny 40 MB/s.Azonao atao ny mamindra ny sarinao na horonan-tsary avy amin'ny fakantsary mankany amin'ny solosaina finday ao anatin'ny segondra.Ny seranan-tsambo USB 87W dia ahafahanao mamatsy ny MacBook-nao ary koa ny solosaina finday sy finday USB C PD hafa mifanentana.Mariho azafady: Ampiasao miaraka amin'ny adaptatera voalohany ho an'ny fitaovanao.
Aseho ho an'ny
• Ity adaptatera ity dia fiderana lehibe ho an'ny solosainao USB-C vaovao.Miaraka amin'ity adaptatera ity, azonao atao ny mandefa / manitatra horonan-tsary miaraka amin'ny seranan-tsambo 2HDMI/VGA avy amin'ny solosainao / monitor / projector / TV.Ary azonao atao ny mampiasa port USB 3.0 Supper Fast Speed ​​​​USB 3.0 (hafainganam-pandeha hatramin'ny 5 Gbps) hampifandraisana ny kapila mafy ho an'ny USB C Latops vaovao, ary 2 USB 2.0 Prot hampifandray ny klavier, totozy (tsy misy hatak'andro) ary SD roa azo ampiharina ary Mpamaky karatra TF ho an'ny famindrana horonan-tsary/sary (hatramin'ny 104 Mbps), Gigabit Ethernet LAN.- Mpampitohy ho an'ny tambazotra marin-toerana kokoa (hatramin'ny 1000 Mbps) sy fifandraisana audio HD (fanohanana ho an'ny feo/mikrofonina (standard CTIA)).
• Natao ho an'ny MacBook Pro/MacBook Air, fanohanana fomba fanitarana sy fomba fitaratra.
• Aza hadino fa:
• Raha HDMI ihany no mifandray dia afaka mampiseho 4K@ 60Hz ny efijery.Ny MacBook Pro 15 mirefy sy 16 mirefy ihany no afaka mahatratra 4K @ 60 Hz, 13 mirefy MacBook Air afaka mahatratra ny resolution 4K @ 30 Hz ambony indrindra.) Rehefa mifandray miaraka ny HDMI sy VGA, dia mampiseho 1080P@ 60Hz ny efijery.
• Mifanaraka amin'ny 15 inch/16 inch 13 inch MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020 na aoriana ary 13 inch MacBook Air 2018/2019/2020 na aoriana
Fanontaniana:Misy adaptatera herinaratra ve, sa tokony hampiasa ny adaptatera herinaratra macbook usb-c ianao hanamafisana ny docking?
Valiny:Ry mpanjifa malala,Misaotra anao tamin'ny fangatahanao.Ny toeram-piantsonanay dia plug and play ary mila ampiasan'ny MacBook-nao.Ho an'ny traikefan'ny mpampiasa tsaratsara kokoa, manoro hevitra izahay ny hampifandray ny fiampangana PD rehefa mampifandray ny toby fiantsonana.
Fanontaniana:Afaka mampifandray monitor roa amin'ny macbook air m1 ve aho amin'ity?
Valiny:Raha manana port USB-C roa ianao amin'ny lafiny iray amin'ny Mac anao - eny azonao atao.Araka ny hitanao, ny plug amin'ny solosaina dia manana seranan-tsambo USB-C roa.
Fanontaniana:Mila fametrahana app sy driver ve ilay fitaovana sa plug and play fotsiny?
Valiny:Tsy mila na inona na inona.Miasa mahafinaritra ao anatin'ny segondra.
teo aloha: 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 mankany HDMI Type-C SD/TF Docking station for Surface Pro 7
Manaraka: Type-C 15w Wireless HUB (12 in 1)